Shirkadda What'sApp oo xadideysa tirada dadka loo diri karo fariimaha - Halbeeg News
CALIFORNIA (HALBEEG)- Shirkadda Whatsapp oo ah shirkad ay Facebooku leedahay Facebook ayaa xadideysa tirada dadka ay hal mar fariimaha u wada diri karto. Shirkaddan ayaa in badan isku dayeysay in ay xadiddo faafidda wararka been abuurka ah ee la isugu diro What’s App-ka.
Shirkaddan whatsApp ayaa isniintii shalay aheyd ku dhawaaqday in ay xadideyso tirada fariimaha halkii marba la diri karo waxaana tiradaasi laga soo yareysnayaa 20 iyadoo laga dhigi doono 5 qof oo kalii.
“Laga bilaabo maanta dhammaan macaaniisha isticmaala noocii ugu danbeeyay ee Whatsapp waxay awoodi doonaan in ay halkii marba fariin u diraan 5 qof oo kalii taas oo kordhin doonto in Whatsapp-ka uu diiradda saaro in fariimaha khaaska ah loo diri karo kaliya asxaabta aadka kuugu dhow” ayaa lagu yiri warbixin ay shirkaddu soo saartay.
Shirkadda Whatsapp ayaa Update-ka marka hore ka hirgelin doonta macaamiisha isticmaala barnaamijka taleefanada ee Android waxaana xigi dadka taleefanada ku isticmaala barnaamijka IOS.
Xadididda fariimaha ayaa ballaarin doonta cabirka barnaamij cusub oo ay WhatsApp soo bandhigtay lix bilood ka hor kadib markii warar been abuur ah oo lagu faafiyay Whats App ay gudaha India ku sababeen dilal. Shirkaddu waxay isticmaashay joornaalada caalamiga ah si ay ugu xayeysiiso digniino ku aaddan wararka been abuurka ah ee WhatsAppka lagu faafiyay.
Shirkadda WhatsApp ayaa sheegtay in xadidaadda fariimaha la isu diro ay timid kadib lix bilood oo la dhageysanayay cabashada macaamiisha shirkadda.
“Wax aanu sii wadi doonaa dhageysiga jawaab celinta macaamiisheena ee ku aaddan sida ay arrinka u arkaan, mudo kadib wax aan soo saari doonaa qaabab kala duwan oo dad badan lagula wadaagi karo fariimaha” ayaa lagu yiri warbixintan ay soo saartay shirkadda WhatsApp.